Lasa tanjon’ny tovovavy any amin’ny faritra an-tendrombohitra avaratr’i Azerbaïdjan ny baolina kitra · Global Voices teny Malagasy
Ankizivavy kamboty roa no milalao ao amin'ny ekipam-pirenena tanora ao Azerbaijan
Voadika ny 07 Mey 2019 4:49 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, Shqip, Português, Français, Español, English
Manaitra izao tontolo izao ny ekipa zazavavy ao Shaki. Sary avy amin'ny Chai-Khana.org.
Tantara avy amin'ny Chai-Khana.org ity lahatsoratra manaraka ity ary navoaka indray eto amin'ny Global Voices araka ny fifanarahana fiaraha-miasa. Avy amin'i Ayten Najaf sy Nurlan Babazade ny lahatsoratra sy ny lahatsary.
Tompondaka ao amin'ny ligin'ny baolina kitra ao an-toerana misy azy i Nahida, 15 taona nahatafiditra baolina miisa 56 tamin'ny 2017. Avy any an-tanàndehiben'i Shaki Izy sy ny ekipa miara-milalao aminy avy ao amin'ny ekipan'ny Gənclik (“Tanora”), tanàna iray tranainy sady mahantra any amin'ny faritry ny tendrombohitra avaratr'i Azerbaïdjan.
Toerana mpandala ny nentim-paharazana izay ahitana ny baolina kitra ho toy ny fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy i Shaki; Ny lehilahy no manjaka ao amin'ny klioba sy ny kianja filalaovam-baolina. Na izany aza, mifanamby tsikelikely amin'izany hevi-draikitra izany i Nahida sy ireo tanora vehivavy mpilalao baolina kitra hafa.
Tsy tranga vaovao ny tantaran'ireo tovovavy avy ao Shaki; Maneho taratra ny fahalianan'ny vehivavy tsy mitsaha-mitombo amin'ny baolina kitra any Azerbaijan ny hafanam-pon'izy ireo. Araka ny Federasionan'ny Fikambanan'ny Baolina Kitra any Azerbaijan dia misy klioban'ny baolina kitra miisa 52 ho an'ny zazavavy latsaky ny 16 taona ankehitriny ao amin'ny firenena izay 36 amin'ireo no niforona tany amin'ny tanàndehiben'ny faritany toa an'i Shaki.
Nandray anjara mavitrika tamin'ny fampahafantarana ny ekipan'i Shaki ny mpanazatra ao an-toerana Mammad Dashadov ary nanampy ireo tovovavy ireo hahatsapa fa misokatra ho azy ireo ihany koa ny kianja filalaovam-baolina.
“Amin'ny ankapobeny, satria ahitana ireo vehivavy milalao ny baolina kitra sady toerana miavaka i Shaki dia somary hafahafa ny fijery ny baolina kitran'ny vehivavy. Raha nanangana ny ekipan'ny baolina kitra vehivavy izahay tao Shaki dia nisy ny fifangaroan-kevitra; ‘Inona izany baolina kitra ho an'ny vehivavy izany?’ Hafahafa ho an'ny mponina ao an-toerana izany, “hoy i Dashadov, izay mampanofana ekipana baolina kitra telo ho an'ny vehivavy.
Niseho ho fitaratra i Mammad raha mbola hafahafa ho an'ireo ray aman-dreny tao Shaki ny fiheverana ny baolina kitra ho an'ny vehivavy. Izy no nanangana ny ekipan'ny baolina kitra voalohany ho an'ny vehivavy tao an-tanàndehibe niaraka tamin'ireo zanany roa vavy, ny zanakavavy roa an'ny anadahiny, ary zanakavavy roa an'ny zaodahiny.
“Nangoniko izy ireo ary natsangako ny ekipa mba ho hitan'ny olona. Taty aoriana dia nanatona ahy ny ray aman-dreny sasany ary nangataka ahy mba handray ny zanany vavy hiditra ao amin'ny ekipa. Sarotra izany tamin'ny voalohany, kanefa nanjary mora kokoa tatỳ aoriana “, hoy i Mammad.
Nanatona ny trano fitaizana zaza kamboty tao Shaki i Mammad fotoana vitsy taty aoriana ary nanasa ireo zazavavy kamboty tao an-tanana mba hiditra ao amin'ny ekipa. Izany no nahitany an'i Nahida sy ireo tovovavy miisa 13 hafa izay liana tamin'ny baolina kitra ary namorona ny ekipan'i UGIM tao Shaki.
“Nanonofy mba ho mpilalao baolina aho tamin'ny fahazazako. Rehefa tonga naka ny zazavavy hanao fanazarantena ny mpampianatra Mammad dia nandeha niaraka tamin'izy ireo aho. Mbola kely aho ka nihazakazaka nanenjika baolina tao anatin'ireo ankizivavy lehibe fotsiny, “hoy i Nahida nahatsiaro niaraka tamin'ny tsikitsiky.
Nahamarika an'i Nahida ny Fikambanan'ny Baolina Kitra ao Azerbaijan tamin'ny farany ary nanomboka nilalao tao amin'ny ekipa nasionaly ho an'ny latsaky ny 17 taona izy.
Mbola manonofy ny hihaona amin'ireo mpilalao baolina kitra malaza manerantany, indrindra fa i Cristiano Ronaldo i Nahida na dia mbola eo am-pifantohana amin'ny fianarany sy ny fiofanany tsy tapaka mba hanatsarana ny fahaiza-manaony amin'ny baolina kitra aza izy, .
Fantaro bebe kokoa ny momba ny nofinofin'i Nahida amin'ny baolina kitra ato anatin'ity lahatsary ity.
1 andro izayKyrgyzstan